Home Wararka Dibada Khatar caafimaad oo ka dhalan karta hilibka digaagga oo la dhaqo ka...
Khatar caafimaad oo ka dhalan karta hilibka digaagga oo la dhaqo ka hor inta aan la karin
Dad badan waxaa laga yaabaa inay u malayaan in hilibka digaagga oo lo dhaqo ay tahay arrin wanaagsan.Ma jirto faah-faahin dheeri ah oo ku saabsan xaqiiqda dhabta ah. Dhaqista hilibka digaagga wuxuu kordhiyaa khatarta caafimaad iyo sumowga cuntada.
Hay’adda heerarka cuntada dalka Ingiriiska ee magaceeda loo soo gaabiyo (FSA) ayaa muddo dheer ka digaysay in hilibka digaagga oo la dhaqo ka hor inta aan la karin ay ka dhalan karto kkatar la xiriirta bakteeriyada loo yaqaanno (campylobacter) oo ku faafta gacmaha qofka dhaqaya,maacuunta iyo dharka qofka. Balse dad badan ayaan dhag dhalaq u siinin digniinta arrintaan laga bixiyay oo howlahooda si caadi ah isaga wata.
Marka aad digaagga dhigto tubada biyaha hoosteeda oo aad ku furto biyaha, waa hubaal in firirka biyaha uu gaarayo wax walba oo yaalla aagga ku dhow tubada. Qaabkaas ayaa ah kan keenaya in bakteeriyadu faafto oo ay gaarto jirkeenna iyo alaabaha kale ee muhiimka ah ee xilligaas yaalla agagaarkeenna.
Qof kasta arrintaan kuma baraarugsana. Sida ay sheegtay hay’adda FSA, 44% dadka ku nool dalka Ingiriiska, waxay dhaqaan hilibka digaagga ka hor inta aysan karin. Sababaha ugu badan ee arrintaa dadku u sameeyaan ayaana lagu sheegay inay tahay in hilibka laga dhaqo wasakhda saaran sida dhiigga amba ay tahayba wax dadku mar walba sameyaan oo ay la qabsadeen.
Bakteeriyada loo yaqaanoo Campylobacter waa waxa ugu badan ee sababa sumowga cuntooyinka,waxaana dadka ku dhaca calool-bax gaarahaanna xilliyada uu qofku yahay safarka. Cudurkaan caadi ahaan waxaa sababa digaagga ceeriin iyo khudaarta darayga ah .Bakteeriyadani waxay ku faaftaa cunista ama cabbitaan leh cudur,sida laga soo xigtay xaruunta MedlinePlus, waxaana ka dhalan kara shuban, calool xanuun, qandho, la-labbo iyo matag.
Xanuunnada la xiriira bakteeriyada Campylobacter, inta badan dadku waxay la xanuusadaan maalmo kooban, laakin dhanka kale waxaa ka dhalan kara xaalado caafimaad darro oo waqti dheer qaata. Cudurada ka dhalan kara waxaa ka mid Mdhicir-wareenka kaas oo dhibaato u keeni kara habdhiska caafimaadka jirka. Arrintaa sidoo kale qofka waxay u horseedi kartaa dhimasho gaarahaan carruurta iyo dadka waayeelka ah.
Waxyaabaha bakteeriyadan looga hortagi karo waxaa ka mid ah cabista biyo badan, cuntooyin kookooban oo aad cunto maalintii oo dhan, halkii aad qadar badan oo cunto ah hal mar aad ka u cuni lahayd waxaa ka haboon in aad cunto. cunto aan badnayn waqtiyo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee waxaa mar walba muhiim ah in aad la xiriirto dhaqtar oo aad u sheegto waxa aad dareemayso si laguu siiyo talooyin wanaagsan oo aan caafimaadkaada waxyeello u gaysan marnaba.
Previous articleCuntada saboolku ay soo saaraan ee madaxweynuhu uu cuno
Next articleWararkii ugu dambeeyay Diyaarad sidday rakaab oo saacdo la waysanaa oo hadda la helay
Rooble oo si cajiib ah uga jawaabay weeraro uga socda baraha...
Maamulka degmada Ceel-wayne ayaa sheegay in ay ku hawllan yihiin hirgelinta...
MW Deni oo khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyey furitaanka kalfadhiga...